Andohatampenaka : Mpanendaka telolahy voasambotra niaraka tamin’ny sabatra – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → avril → 18 → Andohatampenaka : Mpanendaka telolahy voasambotra niaraka tamin’ny sabatra
Andohatampenaka : Mpanendaka telolahy voasambotra niaraka tamin’ny sabatra
Ny alatsinainy lasa teo dia mpanendaka telolahy no voasambotra, teo am-panaovana ny asa ratsiny teny amin’iny faritra Andohatapenaka iny. Mbola tratra teny amin’izy telolahy ireto, izay saika ankizy mbola tsy ampy taona ny sasany, ny zava-maranitra fentin’izy ireo mampitahotra ireo lasibatra. Tamin’io fotoana io dia sendra ny nahay azy ireto tontakely ireto, satria dia teo ambany masona pôlisy iray, tsy nanao fitafiana izy ireo no nanao ny ataony. Nandray ny andraikiny avy hatrany ity farany raha vao nahita izany ary avy hatrany dia nisambotra azy ireo. Niantso ny namany nony avy eo, ary ireto farany no nitondra azy telolahy tany amin’ny kaomisaria foibe tetsy Tsaralalàna.
Isan’ny faritra iray, hanjakan’ny asan-jiolahy sy ny fanendahana tokoa iny faritra Andohatapenaka sy ny lala mamorona ny digue iny. Eny fa na dia eo tokoa aza ny ezaka ataon’ireo pôlisy misahana ireo faritra ireo. Mazàna dia ankizy tsy ampy taona ireo mpanao ny asa ratsiny eny amin’iny faritra iny. Ankizy izay manao andiany ary mampihorohoro tokoa, na ireo ao anaty fiara na ireo mpandeha tongotra, indrindra moa fa raha vao manomboka hariva ny andro na ilay vao maraim-be iny.
ninja 18 avril 2018 at 13 h 59 min · Edit
Miombo-kevitra amin’i Tojo za. Mety koa anie ny tsy fisiana no mahatonga an’izany e ! Satria dia misy ray na reny mamono tena mihintsy tsy mahazaka nmijery ny zanany maty mosary.Manaiky koa izaho amin’ny tsy fandriam-pahalemana satria dia misy tokoa ny manolana sy mamono olona, mamaky trano sns…..Izay tsy mba toetran’ny Malagasy hatramin’izay. Ka inona ary ny antony mahatonga an’izany ?????? Iza no tompon’antoka ,sy andraikitra Education, sa Politika, sa Mosary ?
Tojo 18 avril 2018 at 10 h 57 min · Edit
Mety izany koa ilay nanendaka anay mivady teny 67ha, satria nitondra sabatra koa zareo t@zay.
Ny olana, mavaina loatra ny sazy omena azy ireny, ary mazana @ maha tany andalam-pandrosoana antsika de mbola misy foana ny kolikolo ka raha mando vola be zareo dia afaka madiodio ian, ka lasa miverina @ asa ratsy fanaony.
Sosokevitra: tokony ahamorana ny famoronana oron’asa ary omenao subvention ireo oron’asa sahirana mba afahan ny tanora miasa